Qiimo-dhimista Adeegga Internetka - Caymiska Caafimaadka Deegaanka ee Gobolka Washington - CHPW
Bogga ugu weyn > Raadi Qorshe > Qorshaha Caafimaadka Apple > Qorshee Faa'iidooyinka > Qiimo-dhimista Adeegga Internetka
Qiimo-dhimista Adeegga Internetka
Waxaad u qalmi kartaa adeegga internetka ee xawaaraha sare leh ee billaha ah inta lagu jiro COVID-19.
Community Health Plan ee Washington (CHPW) waxay ku faraxsan tahay inay kula socodsiiso inuu jiro barnaamij cusub oo federaal ah oo loogu magac daray Gargaarka Ballaadhka Degdegga ah si loo caawiyo dadka Mareykanka ah ee ku dhibtoonaya inay bixiyaan adeegga internetka inta lagu jiro COVID-19.
Gargaarka Degdegta ah ee Degdegta ah wuxuu siiyaa adeeg internet bille ah qiimo dhimis qoysaska u qalma
Faa'iidada waxaa ka mid ah:
Ilaa $ 50 qiima dhimis bishii adeegga internetka iyo kirada qalabka la xidhiidha
Ilaa $ 75 qiima dhimis bishii haddii qoysku shidan yahay Tdhulalka ribal
A hal-dhimis ilaa $ 100 si aad ugu iibsato laptop, kiniin, ama kumbuyuutar kumbuyuutar oo laga iibsado adeeg bixiye ka qayb qaadanaya
Eeg sida loo dalbado internetka jaban ➜
* Guji si aad u aragto jawaabaha
Waad xaq u leedahay haddii hal xubin oo reerkaaga ah ayaa buuxiya mid kamid ah shuruudaha hoos ku xusan:
Hayso dakhli ka hooseeya ama ka hooseeya 135% ka mid ah Tilmaamaha Faqriga ee Federaalka
Kaqeybgal barnaamijyada gargaarka ee dowladda qaarkood, sida Cuntada Aasaasiga ah (SNAP), Apple Health (Medicaid), ama Lifeline
Ku hel dheefaha hoosta barnaamijka qadada ama quraacda iskuulka bilaash iyo qiimo jaban
Helay Deeqda Dawladda Federaalka ee 'Pell Grant' inta lagu gudajiray sanadka abaalmarinta
Khibrad lumis dakhli sabab u ah shaqo lumis ama furlough tan iyo Febraayo 29, 2020
La kulan shuruudaha u-qalmitaanka ee kaqeyb galayaasha kaqeyb galaya ee jira ee dakhligoodu hooseeyo ama barnaamijka COVID-19
Waxaa jira saddex siyaabood waad dalban kartaa:
La xiriir adeeg bixiyahaaga hadda oo weydii haddii ay ka qaybgalaan barnaamijka Gargaarka Ballaadhka Degdegga ah. Waxay ku siin doonaan faahfaahin ku saabsan adeegyada laga yaabo inay heli karaan qayb ka mid ah barnaamijka iyo xulashooyin si ay ugu dabaqaan qiimo dhimista adeeggaaga jira (haddii ay khuseyso)
Haddii aadan haysan adeeg bixiye hadda ah, ama haddii aysan ka qaybqaadan barnaamijka, waad awoodaa codsan online bogga FCC.
Waxaad sidoo kale ku dalban kartaa boostada. Ku daabac codsi gudaha English or Spain (tilmaamaha sidoo kale waxaa lagu heli karaa 9 luqadood oo dheeri ah). Buuxi arjiga oo u dir caddeyn u-qalmitaanka:
Xarunta Taakulaynta Ballaadhka Degdegga ah
Intee in le'eg ayuu faa'iidadani socon doonaa?
Faa'iidada ayaa dhammaan doonta marka lacagtu ka dhammaato lacagta, ama lix bilood ka dib markii Waaxda Caafimaadka iyo Adeegyada Aadanaha ee Mareykanka ay ku dhawaaqdo in la joojinayo xaaladda degdegga ah ee COVID-19, hadba tii dhaqso u dhacda. Dabeecadda ku-meel-gaarka ah ee faa'iidada awgeed, waxaan kugu dhiirigelinaynaa inaad sida ugu dhakhsaha badan ee aad awoodo u dalbato.
Halkeen wax badan ka baran karaa?
Booqo HelEmergencyBroadband.org inaad waxbadan barato oo aad aragto sida loo helo dheefahaaga. Waxa kale oo aad ka wici kartaa Xarunta Taakulaynta Ballaadhka Degdegga ah lambarka ah 1-833-511-0311 ama email [emailka waa la ilaaliyay].
Taariikhda Ugu Dambeysa ee Cusboonaysiinta: Julaay 2, 2021